मैले आफुले जित्ने भन्दा पनि यहाँका जनता सबैले जित्ने हो – विष्णु लामिछाने
By vijayafm on	 November 27, 2017 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, स्थानीय
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा निर्वाचनका लागि पूर्व नवलपरासीमा चुनावी अभियानमा तातेको छ । दलहरु आफ्ना एजेण्डा जनतालाई सुनाउन र जनताको मन तान्न तल्लिन रहेका छन् । पूर्व नवलपरासीको क्षेत्रमा ठूला दलहरुको चुनावी अभियानले तीव्रता पाइरहेको छ भने साना केही दलहरुको चुनावी अभियान खासै देखिदैन । नेपाली काँग्रेस, बामगठबन्धन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्तिले आफ्ना चुनावी अभियानलाई तीव्र पारिरहेका छन् । यस मिसन इलेक्सनको विशेष स्तम्भमा नवलपुर क्षेत्र नं २ (१) का प्रदेश सभा तर्फ नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विष्णु लामिछानेसंगको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
तपाई नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापुर्व प्रतीनिधी सभा २ को प्रदेश सभा क को उम्मेद्धार हुनुहुन्छ । जित्छु भन्ने लागेको छ ?
होईन, अब स्वभावीक रुपले मैले आफुले जित्ने भन्दा पनि यहाँका जनता सबैले जित्ने हो । त्यसो भएपछी यहाँका सबै जनता मेरो साथमा हुनुहुन्छ त्यसैले पनि म आफु ढुक्क छु जित्छु भन्नेमा ।
तपाईको जितका आधार के के ?
जहिले पनि चुनावमा दुई वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मतदाताले भन्ने ालग्छ मलाई । पहिलो त्यो पार्टी जुन पार्टीबाट उम्मेद्धारले उम्मेद्धारी दिएको छ । त्यो पार्टीको ईतीहास के हो र त्यो पार्टीले अहिलेसम्म मुलुकका लागि दिएको योगदानहरु के के छन् हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा पनि नेपाली काँग्रेस अहिले सम्म जति परिवर्तन भएको छ । सबै परिवर्तनहरु नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ । २००७ साल देखी गणतन्त्र आउदासम्मको नेतृत्व सबै काँग्रेसले गरेको छ । त्यो बाहेक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो पहिलो संबिधान सभा विगठन भो र दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय शुशिल कोईरालाकै नेतृत्वमा संबिधान पनि आएको छ । अर्थात अहिलेसम्म मुलुकमा जे जति प्रगति भएको छ परिवर्तन भएको छ, त्यो काँग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ती आयो काँग्रेसकै नेतृत्वमा संबिधान पनि पनि आयो त्यसकारण पनि नेपाली जनताले अब समृद्धीको खाँचो र त्यो पनि नेपाली काँग्रसकै कारणले हुन्छ । अथवा मुलुकले निकास पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा पाउँछ भन्नेमा नेपाली जनता ढुक्क छन् ।
सबै काम काँग्रेस एक्लैको प्रयासमा भएको त हैन होला ?
मैले नेपाली काँग्रेस एक्लैले भनीन, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भनेको छु । हामी लोकतन्त्रमा विस्वास गर्छौ नेपाली जनता पनि लोकतन्त्रमा विस्वास गर्छन् । नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागी परेको पार्टी भएर पनि राष्ट्रिय पार्टी हो राम्रो छ । दोस्रो मतदाताले हेर्ने उम्मेद्धार हो । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेद्धारी दिनुभएका सबै उम्मेद्धार अब्बल दर्जाका हुनुहुन्छ । मेरो आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ भने म लामो समयदेखी जिल्लामा जनतासंगै बसेर काम गरेँ । कार्यालय सचिव, जिल्ला सचिव हुँदै जिल्ला सभापती भएको छु । यहाँका जनताका हरेक सुख दुखमा मैले साथ दिएको छु । काम गर्ने क्रममा पनि मैले कैले पनि यो पार्टी त्यो पार्टी कुन पार्टी भनेर सोधीन । मलाई सबै पार्टीका कार्यकर्ता जनता हुन भन्ने विस्वास छ । त्यसकारण पनि मलाई जनताले रोज्नेछन् ।
तपाईको क्षेत्रका मतदाता समक्ष खास खास एजेन्डा के छन् ?
व्यक्तीगत रुपमा बिष्णु लामीछानेका एजेन्डा छैनन् । जनताका एजेन्डा नै मेरा एजेन्डा हुन् । यहाँका जनताले विकास चाहेका छन् समृद्धी चाहेका छन् शिक्षा चाहेका छन् । मेरो पनि चाहना त्यही हो । यहाँ थुप्रै समस्या छन् चुनौती पनि छन् सम्भावना पनि उत्तीकै छन् । दक्षीणतिर थारु समुदाय भेषभुषा, र संस्कृती यहाँको चुनौती र सम्भावना दुवै हो । पर्यटन र कृषी मेरो प्रदेशको मुख्य सम्भावना मैले देखेको छु । भुमीहिन किसानको सुकुम्वासीको समस्या विकासका थुप्रै कामलाई मुर्त रुप दिन छ । माझी मुसहर बोटे बस्तीका समस्या लगायतका बिषयलाई मैले उठान गर्नुछ ।
यि एजेन्डामा तपाईले काम गर्नुहुन्छ भनेर विस्वास कसरी गर्ने ?
म लामो समय राजनीति गरेँ । मैले राजनीतिलाई कहिल्यै पनि पेशा भनीन । राजनीति सेवा हो भनेर गरीरहे । मलाई त्यसको आधार भनेको पहिलो जनता हो । म जनताकै आडमा सम्बन्धीत ठाउँमा पुग्नुपर्छ र बजेट विनियोजन देखी विकासका योजनालाई मुर्त रुप दिनुपर्छ भन्ने हो । म एउटा दलको जिल्ला सभापती त थिएँ तर त्यतीलेमात्र पुग्दोरैनछ । पार्टी नेतृत्वमा भएर मात्र होईन नीति बनाउने ठाउँमै पुगेर काम गर्न मलाई जनताको आड छ भरोसा छ ।